Download ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK 1.0 - Only in DownloadAtoZ - More Apps than Google Play.
4.2/5 100,000 5.21 MB
Apk Download » News & Magazines » ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News )
de ca da fa ja ta nb ge he ne af bg th zh fi hi vi mk sk uk el gl nl pl sl tl am in ko no ro sq ar fr hr mr sr tr cs es ms et it lt pt eu hu ru zu lv sv iw sw fr_CA lo_LA en_GB bn_BD et_EE ka_GE sr_ME ky_KG km_KH zh_HK si_LK mk_MK ur_PK hy_AM my_MM zh_CN ta_IN te_IN ml_IN en_IN kn_IN mr_IN mn_MN ne_NP pt_BR gl_ES eu_ES is_IS sr_RS es_US pt_PT zh_TW ms_MY kk_KZ uz_UZ
We provide ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK 1.0 file for Android 4.0 and up or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire and many Android Phones such as Sumsung Galaxy, LG, Huawei and Moto. ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK isafree News & Magazines Apps.
It's newest and latest version for ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK is (com.heinlay.news.apk). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK detail and permission below and click download apk button to go to download page.
On download page, the download will be start automatically. You need download All-in-One APK Downloader first. we provide direct download link for ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK 1.0 there. ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK is the property and trademark from the developer
Please be aware that we only share the original and free apk installer for ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK 1.0 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications. if there is any problem please let us know.
ရောင်နီဦး (သတင်းစုံ)သည် နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေသော သတင်းများကို စုံလင်စွာ ဖော်ပြပေးမည့် Android apk တစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊
ရောင်နီဦး(သတင်းစုံ)တွင် နေ့စဉ်သတင်းများ၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံရေးသတင်းများ၊ ဘောလုံးသတင်းများ အပြင် ပညာရေးသတင်းများ၊နည်းပညာသတင်းများ၊ကျန်းမာရေးသတင်းများနှင့် စီးပွားရေးသတင်းများစသည့်
ခေါင်းစဉ်များဖြစ် စုံလင်စွာ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းစာ၊ဂျာနယ် အမျိုးမျိုး ၀ယ်ဖတ် စရာမလိုပဲ အသစ် အသစ်သော သတင်းများ ကို ရောင်နီဦး(သတင်းစုံ) တွင် Sync လုပ်လိုက်၇ုံဖြင့် ဖတ်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ေ၇ာင်နီဦးနှင့်အတူ သတင်းထူး သတင်းဦးများကို နေ့စဉ် ဖတ်ရှုလိုက်ကြပါစို့။
ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) Permissiom From Google Play:
ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK Photos/Media/Files: modify or delete the contents of your USB storage,read the contents of your USB storage
ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK Storage: modify or delete the contents of your USB storage,read the contents of your USB storage
ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK Wi-Fi connection information: view Wi-Fi connections
ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK other: full network access,view network connections,run at startup,prevent device from sleeping,control vibration,control flashlight
ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) Permissiom From APK File: OTHER: Allows applications to open network sockets.
ရောင်နီဦး သတင်းစုံ ( News ) APK Latest Version Download
More From Burmese Tiger MORE
Myanmar TV Channel 2
Myanmar iT Learning
Coc Call Blocker